သတင်းစာဆရာ၊ အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းဆရာ ဦးခင်မောင်လတ်၏ သေတမ်းစာ « Colorful People of Burma / Myanmar
သတင်းစာဆရာ၊ အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းဆရာ ဦးခင်မောင်လတ်၏ သေတမ်းစာ
ဦးခင်မောင်လတ် (၁၉၁၅ - ၁၉၉၆)
(ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အဖြစ် ယခင် စာပေဂျာနယ် ၁၉၉၄က ပြန်လည်ကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်)
သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၀၉
Thus let me live unseen, unknown.
Steal from the World , and notastone tell where I lie.
အဲဒီလို လူမသိ သူမသိ နေချင်လှ
အဲဒီလို လူမဆွေး သူမဆွေး သေချင်ပ၊
လူသူလေးပါး တိတ်ချိန်ကျ လောကကြီးက ထွက်ခွာမှ၊
ငါလျောင်းရာ ဘာကျောက်တိုင်မှ မပြ။
အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့နာရေးကြော်ငြာမှာ“သွားလေသူရဲ့ဆန္ဒအရအသုဘပို့ခြင်းသီးခံပါ” လို့ရေးထားတာ တခါတုန်းက တွေ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီဆန္ဒဟာ ဘဘရဲ့ဆန္ဒနဲ့တထပ်ထဲကျနေတယ်။ ဘဘကတော့ အသုဘလဲ မပို့စေချင်ဘူး။ သတင်းစာထဲမှာလည်း မိတ်ဆွေရင်းချာတွေကတော့ မသိဘဲလဲ မနေဘူး။ မပို့ဘဲလဲ မနေဘူး။ သူတို့ကတော့ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ ပူဆွေးမည့်သူ၊ ကူညီမည့်သူတွေပဲ။ မပို့ရင် မကောင်းလို့ ပို့မည့်သူတွေ မဟုတ်။ ၀တ္တရားရှိလို့ ပန်းခွေပို့မည့်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ၀တ္တရားရှိလို့ အသုဘပို့တဲ့ကားတွေပေါ်မှာ လိုက်လာပြီး ကားပေါ်ကတောင် အောက်မဆင်းဘဲ အိမ်ပြန်ကြတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဟေးလားဝါးလားနဲ့ တသောသောရယ်မောရင်း မသာပို့တဲ့လူတွေလဲ မဟုတ်ဘူး။
သတင်းစာထဲမထည့်လို့အဲဒီလိုလူတွေ မပို့နိုင်ကြတာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ မိသားစုအဖို့ ပို၍ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ တရပ် မဟုတ်ပါ။ သတင်းစာထဲ မထည့်လို့် ဖြစ်ပေါ်မည့် အကျိူးကျေးဇူးမှာ ယနေ့ခေတ် ပကာသနကြောင့် ပို့ကြသော ပန်းခွေများအတွက် အချီးနှီးကုန်ကျစရိတ် သက်သာသလောက် သက်သာသွားလိမ့်မည်။
ပူဆွေးကြေကွဲနေကြတဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအဖို့မှာ၊ ပန်းခွေပို့ရန်မလိုတဲ့ ရင်းနှီးသော ဆွေမျိူးညာတိ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ အပေါင်း၏ နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်း၊ ထပ်တူဝမ်းနည်းခြင်း အစစ်အမှန်ကို အားပါးတရ ခံယူရရှိနိုင်ကြမည်။
ဒါက သတင်းစာမှာ နာရေးကြော်ငြာ လုံးဝမထည့်ရင် ရှိမည့် အကျိူး။
သတင်းစာထဲ ထည့်မည်ဆိုလျှင် “ကွယ်လွန်သူ၏ဆန္ဒအရ အသုဘပို့ခြင်း၊ ပန်းခွေပို့ခြင်း သည်းခံပါ” လို့ထည့်မှ ဖြစ်မည်။ ဒီလိုဆိုပြန်တော့ လူအများ ခေတ်စားနေတဲ့ ထုံးစံတခုကို ဖီလာဆန့်ကျင်နေတာဟာ အလကားနေရင်း အမုန်းပွားအောင် တကိုယ်တော်ဝါဒနဲ့ အတ္တလွန်ကဲရာ ရောက်နေမလားလို့လဲ စဉ်းစားမိတယ်။
သားတို့သမီးတို့ မြေးတို့အနေနဲ့လဲ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အတွေးအမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါ့။ ဘဘသဘောထားကိုသာ သားတို့သိဖို့ ပြောပြနေတာပါ။ သားတို့ သမီးတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူများမလုပ်တဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကြောင့် သားတို့ သမီးတို့ကို ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်မှာ စိုးရင်၊ ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးမှ “ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဆန္ဒအရ ကိစ္စပြီးမှ ဤကြော်ငြာကို ထည့်ရပါသည်” လို့ ဆိုရင် လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဒီစာ ထိပ်ဆုံးမှာ ပါတဲ့ The Quiet Life ကဗျာလေးက ဘဘ ၃ တန်းမှာ သင်ရကတည်းက ခေါင်းထဲမှာစွဲပြီး သဘောကျနေတာ၊ ဘဘတို့က လူစည်ကားတာကို ဘယ်လောက်ကြောက်သလဲဆိုရင် သားတို့သမီးတို့အသိဆုံးပေါ့။ တဦးတည်းသောသားရဲ့ တသက်တစ်ခါ မင်္ဂလာကိစ္စကို အတိုချူံးပြီး တရားသူကြီးနဲ့ လူကြီးစုံရာရှေ့မှာ ပြီးလိုက်တာဟာ သမီးကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုယ်တိုင်က သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ သဘောထားကြီးစွာ ခွင့်ပြုလို့သာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတာ ကိုယ့်လိုလူလဲ ရှိသေးတယ်နော်။
(စာကြွင်း - ဆရာဦးခင်မောင်လတ် အဲသည်စာကို ၁၉၉၄ မှာ ရေးခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၆ သြဂုတ်လ ၁ ရက်မှာ ကွယ်လွန်ပါတယ်။ ဆရာနဲ့ ရာသက်ပန်လက်တွဲခဲ့သူ ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က သူတို့ရဲ့ ဘ၀ခရီးကို အခုလိုမျိုး ရေးခဲ့ဖူးတာလေးကို ဖြည့်စွက်လိုက်ပါရစေ)
ကျမ၏ အိမ်နီးချင်းတဦးမှာ ကိုလတ်အမည်ရှိ လူငယ်တဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျမကဲ့သို့ စာဖတ်ဝါသနာပါသူ ဖြစ်သည်။ ကျမဖတ်သော စာအုပ်များနှင့် သူဖတ်သော စာအုပ်များအကြောင်း ပြောကြသည်။ စာအုပ်များ လဲလှယ် ဖတ်ကြသည်။ကျမတို့ လဲလှယ်ဖတ်ကြသော စာအုပ်တအုပ်မှာ Louisa M.A. Lcott ၏ Little Women ၀တ္ထု ဖြစ်သည်။ ထိုဝတ္ထုထဲမှ မင်းသမီးဖြစ်သော Little Jo ကိုအစွဲပြု၍ ကိုလတ်က ကျမကို ကျီစားသည့်အနေနှင့် ဂျိူ ဟုခေါ်သည်။ ကျမတို့ တွေ့ကြတိုင်း စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောမဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ၀ါသနာတူ၊ ဘ၀ချင်းတူသူ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံ စကားများပြောမဆုံး ဖြစ်သည့်အခါ ရွေးစရာလမ်းမှာ တခုသာ ရှိသည်။ ၎င်းမှာ တသက်လုံး အတူတူနေကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ဒေါ်ခင်မျုိးချစ် - ၁၉၁၅ - ၁၉၉၉)